We Fight We Win. -- " More than Media ": တိဗက် သီလရှင်များ ကွန်ဖူး လေ့ကျင့် နေ ပုံ
တိဗက် သီလရှင်များ ကွန်ဖူး လေ့ကျင့် နေ ပုံ
Buddhist nuns practise kung fu at the Amitabha Drukpa Nunnery near Kathmandu. Every day, they exchange their maroon robes and philosophical studies foraintense 90-minute session of hand chops, punches, shrieks and soaring high kicks.
တိဗက် သီလရှင်များ ကွန်ဖူးလေ့ကျင့်နေကြပုံဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့အေဖက်ပီ သတင်းမှာ ခေါင်းကြီးအနေနဲ့ သတင်းထူးတရပ်အနေနဲ့ ပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သီလရှင်တွေက နံနက်တိုင်းလေ့ကျင့်ကြတယ်ဆိုတယ်။ အထိုးအခုတ် နဲ့ အကန်အကြောက်တွေပါပါတာပါ။ နေစဉ် မိနစ် ၉ ၀ လေ့ကျင့်ကြတယ်ဆိုတယ်။ ဆရာတော်လေးတွေက နိပေါနိင်ငံ၊ ခတ်တမန်ဒူး ကျောင်းဝန်းမှာသီတင်းသုံးကြပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်က သီလရှင်တွေထက်ပို ပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှိပုံရတယ်။ ခရစ်ယန်နဲ့မူစလင် တွေမှာလဲ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတာကို ထောက်ပြချင်တဲ့အတွက် အေအဖက်ပီသတင်းမှာခုလို သတင်းကြီးအဖြစ်ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သီလရှင်တွေ ကွန်ဖူးကျင့်တာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးထင်တယ်
မောင်မိုးသီး။ ဘာသာရေးအမြင်အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ လုံးဝ မအပ်စပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဘလော့မှာ ပိုစ့်တွေတင်ရင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်ရာဖြစ်အောင် တင်သင့်ပါတယ်။